Goolhaayaha Kooxda Roma Alisson Becker Oo Ka Warbixiyay Kahor Koobka Aduunka 2018 In Xidiga Ugu Muhiimsan Xulka Qaranka Brazil Uu Yahay Neymar Jr. – GOOL24.NET
Goolhaayaha Kooxda Roma Alisson Becker Oo Ka Warbixiyay Kahor Koobka Aduunka 2018 In Xidiga Ugu Muhiimsan Xulka Qaranka Brazil Uu Yahay Neymar Jr.
Taageerayaal badan oo reer Brazil ah ayaa ka rajeynaya bandhig cajiib ah dhamaan ciyaartoyda ku sugan xulka qaranka seleção, si ay u ilaabaan dhacdadii ay la kulmiin koobkii aduunka 2014, dabcan waxaana rajada ugu weyn ay qabaan uu noqon doonaa xidiga kooxda Paris Saint Germain.
Saxaafada caalamka ayaa waxay aaminsan tahay in nuqulkan xulka qaranka seleção uu yahay kan ugu xoogan sanooyinkii ugu dambeeyay, waxaana in badan ay u saadaalinayaan in uu yahay xulka ugu cad cad eek u guuleysan kara koobka aduunka, sababa la xidhiidha xidigaha uu sanadan soo xushay macalinka hogaaminaya Tite.
Si kastaba goolhaayaha kooxda Roma iyo xulka qaranka Brazil Alisson Becker ayaa wuxuu sheegay in xidigaha ugu muhiimsan xulka qaranka seleção xiligan uu yahay Alisson Becker. kuwaas oo qaar ka mid ah ay u maleynayeen in koobka aduunka uu ku seegi doono dhaawacii darnaa ee soo gaaray.
Neymar ayaa ku dhaawacmay bishii February kulan ka tirsanaa horyaalka Faransiiska, ka dibna wuxuu maray qaliin, lakiin wuxuu go’aansaday inuu sida ugu dhaqsida badan uu kaga soo kabsado kahor inta aan la gaarin Koobka Aduunka.
Alisson Becker oo ka hadlayay Neymar Jr ayaa wuxuu yidhi: “Nasiib wanaageena Neymar Jr ayaa ku guuleestay in si wanaagsan ee saxan uu ula fal galo dhaawacii uu qabay, wuxuun kaga soo kabtay si dhaqsi ah”.
“Markii aan bilaabanay tababarka xulka qaranka qof walba wuxuu, qof walba wuxuu la baqanayay naftiisa iyo inuu dhaawac soo gaaro, laakiin wuxuu si dhaqso ah qeyb kaga soo noqday tababarka taasoo laabta u qaboojisay qof walba, Neymar wuxuu ku guuleystay inuu ka takhaluso cabsidii iyo cadaadiskii uu qabay si uu ula qabsado koobka aduunka”.
Alisson Becker ayaa wuxuu hadalkiisa kusoo xidhay: “Wuxuu ku soo bandhigay kulankii Croatia qaab ciyaareed fiican, haatan waxaan xiiseeneynaa bilaabashada Koobka Aduunka”.